Finfinneetti barattootni kuma 39 ol Afaan Oromootiin barachaa jiru – Fana Broadcasting Corporate
Finfinneetti barattootni kuma 39 ol Afaan Oromootiin barachaa jiru
Finfinnee, Onkololeessa 28, 2012 (FBC) – Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaa hunda keessatti barattootni kuma 39 fi 365 manneen barnootaa mootummaa keessatti Afaan Oromootiin barachaa akka jiran Biiroon Barnootaa Finfinnee beeksise.
Qindeessaan sagantaa barnoota Afaan Oromoo biirichaa Obbo Abiyyuu Bayyanaa Gaazexaa Bariisaaf akka ibsanitti, qabsoo hadhaawaa ummatni Oromoo gaggeessaa tureen waggoota sadan darbanirraa kaasee Afaan Oromootiin barnootni idilee manneen barnootaa mootummaa sadarkaa tokkoffaa keessatti kennamaa jira.
Kanaanis Biiroon Barnoota Oromiyaa jalqaba manneen barnootaa sadarkaa 1fa afur (Jeneraal Taaddasaa Birruu, Waaqoo Guutuu, Gaara Guuriifi Burqaa Waayyuu) banuutiin barnootni idilee Afaan Oromootiin akka eegalamu taasiseeraa jedhan.
Bara darberraa kaasee ammoo sochii cimaa hoggansi Injinar Taakkalaa Uumaa taasisaniin barnootni Afaan Oromoo manneen barnootaa mootummaa sadarkaa tokkoffaa hunda keessatti akka kennamuuf tattaaffiin olaanaa taasifamaa tureera; milkaa’innis argamuusaa dubbataniiru.
Manneen barnootaa mootummaa bulchiinsa kutaalee magaalaa kurnan keessatti barattoota kuma 45 ol galmeessuuf kan karoorfame yoo ta’u, hanga kuma 42 galmeessuun danda’ameeraa jedhan.
Sababa tajaajilli geejiba barattootaa addaan citeen garuu wayita ammaa magaalittiitti barattootni kuma 39fii 365 manneen barnootaa 126 keessatti sirnaan barnootasaanii hordofaa akka jiran ibsaniiru.
Kutaalee bulchiinsa magaalaa kanneen akka Araadaa, Lidetaafi Qirqositti garuu rakkoon ilaalchaa ogeessota barnootaarratti calaqqisaa waan jiruuf saffisa barbaadamuun deemuu akka hindandeenyes himaniiru.
Haalli qubsuma ummataa kutaalee magaalaa kanneeniis isaan hafanirra rakkoo kan qabu waan ta’eef, baay’inni barattoota Afaan Oromootiin galmaa’anii xiqqoo ta’uus eeraniiru.
Akka jalqabbiitti garuu hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa waan ta’eef, bulchiinsa magaalichaa, ogeessota Biiroo Barnootaa Oromiyaafi Finfinneef galata qaban dhiyeessaniiru.
Jiraattotni magaalittiis hawaasa manneen barnootaa tumsuun milkaa’inasaaf gumaachuu akka qabanis gaafataniiru.